တရားမဝင် နိုင်ငံခြား လုပ်သားများပြဿနာ မလေးရှား တင်းကျပ်စွာ ကိုင်တွယ်နေကြောင်း မြန်မာ အလုပ?? - Yangon Media Group
တရားမဝင် နိုင်ငံခြား လုပ်သားများပြဿနာ မလေးရှား တင်းကျပ်စွာ ကိုင်တွယ်နေကြောင်း မြန်မာ အလုပ??
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၈
တရားမဝင် နိုင်ငံခြားလုပ်သားများပြဿနာကို မလေးရှားအစိုးရက တင်းကျပ်စွာကိုင်တွယ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း တရားမဝင်နေထိုင်သူ မြန်မာများ သတိပြုကြရန် မြန်မာသံရုံးက ထုတ် ပြန်လိုက်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် အဆိုပါသတိပေးချက်ကို ဇွန် ၈ ရက်တွင် သံရုံးလူမှုကွန်ရက်စာမျက်မှတစ်ဆင့် ထုတ် ပြန်သတိပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သတိပေးချက်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရက မလေးရှားနိုင်ငံတွင်းရှိ တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသား အလုပ်သမားများ ပြဿနာကို တင်းကျပ်သည့် စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်အညီ အလေးပေးကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ ဖမ်းဆီးမိသည့် တရားမဝင်အလုပ်သမားများအား လူဝင်မှုကြီးကြပ် ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြင့် အ ရေးယူသွားမည်ဟု ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇွန် ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ကြေညာခဲ့ ကြောင်း ကွာလာလမ်ပူမြို့ Petaling လမ်းရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနတွင် တရားမဝင်နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများဖမ်းဆီးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်ကို စတင်ချမှတ်ခဲ့ပြီး တရားမဝင်အလုပ်သမား ၁၇ဝ ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အပြင် တရားမဝင်အလုပ်သမားများ အထောက်အထားထုတ်ပေးရေးအစီအစဉ် (Rehiring Programme)သည်လည်း ဇွန် ၃ဝ ရက်အထိသာပြု လုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော့မည်မဟုတ်ဟု မလေးရှားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး Muhyiddin Yassin က တရားဝင်ကြေညာထားကြောင်း ယင်း ကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာ နိုင်ငံသားများအား အသိပေးကြေ ညာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
”ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ တရားမဝင်တွေဖမ်းမယ်ဆိုတာ နှစ်စဉ်ခဏခဏကြေညာနေကျမို့ ရိုးနေပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ တရားမဝင် အထောက်အထားလုပ်ပေးရေးအ စီအစဉ်ဆိုတာလည်း ပြောတော့ သာအလကား၊ တကယ်လုပ်ရင် ရင်းဂစ် ၂ဝဝဝ လောက်က အသာ လေးကုန်နေတယ်။ ကျန်တာမပါ သေးဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်း KL က တရုတ်တန်းမှာဆက်တိုက် ဖမ်းနေတယ်”ဟု မလေးရောက် မြန်မာလုပ်သား ကိုသန့်စင်မောင်ကဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းက ကွာလာလမ်ပူမြို့ရှိ တရုတ်တန်းအတွင်း တရားမဝင်နိုင်ငံခြားသားလုပ်သား ရာချီဖမ်းဆီးခံရပြီး မြန်မာလုပ်သား အချို့လည်းပါဝင်ကြောင်း ၎င်းထံမှ သိရသည်။
အဆိုတော် အစ္စဏီ၏ ရှေ့နေလေးဦးကို အမှုလိုက်ခွင့် ပါဝါ ရုပ်သိမ်း
တရုတ်ဘက်မှ ဆန်လုံးဝ အဝယ်မရှိသဖြင့် မူဆယ်တွင် ဂိုဒေါင်အပြည့် ဆန်အိတ်များ သိန်းချီ သောင်တင်??
အိမ်ထောင်သက် ၂၄ နှစ်ပြည့်သော မိဘများကို ဂုဏ်ပြုသည့် မိုင်လေဆိုင်းရပ်စ်
အမေရိကန် စစ်သင်္ဘောက အီရန် ဒရုန်းလေယာဉ်အား ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြားတွင် ပစ်ချ